China Fivoahana ivelany fividianana sarety azo amboarina sy famokarana | Ruiyi
Carto azo ahodina azo ampiasaina any ivelany
Ny fiara fitaovana safidy voalohany ho an'ny carto de ligne azo ampiasaina azo esorina ivelany, izay mety, azo ampiharina ary mahomby. fiarovana ny tontolo iainana.
Mora entina: azo atambatra ao anatin'ny segondra, tsy mila fivoriambe! Azo aforitra ao anaty poketra ho fitahirizana mora foana. Kely habe, mety amin'ny fametrahana ao anaty lalimoara, rindrina na vatan'ny fiara mahazatra rehetra. Ny fiara azo ampiasaina mikatso dia tena mety amin'ny fiantsenana fitetezam-paritra, fitsangantsanganana an-trano na amin'ny maha trolley vokatra azy, tena mety amin'ny dia, fitsangatsanganana, fialan-tsasatra, zaridaina, zaridaina, toby, fivarotana enta-mavesatra, zoo, hetsika ara-panatanjahantena ivelany na zavatra mampihetsi-po fotsiny.
Fiara fitaovana safidy voalohany ho an'ny Carto azo ahodina azo ampiasaina any ivelany, izay mety, azo ampiharina ary mahomby. fiarovana ny tontolo iainana.
Mora entina: azo angonina ao anatin'ny segondra, tsy mila fivoriana! Azo aforitra ao anaty poketra ho fitahirizana mora foana. Kely habe, mety amin'ny fametrahana ao anaty lalimoara, rindrina na vatan'ny fiara mahazatra rehetra. Ny fiara azo ampiasaina mikatso dia tena mety amin'ny fiantsenana fitetezam-paritra, fitsangantsanganana an-trano na amin'ny maha trolley vokatra azy, tena mety amin'ny dia, fitsangatsanganana, fialan-tsasatra, zaridaina, zaridaina, toby, fivarotana enta-mavesatra, zoo, hetsika ara-panatanjahantena ivelany na zavatra mampihetsi-po fotsiny.
Anisan'izany ny: kofehy azo ovaina ho mora entina, ary mpitazona kaopy 2 harato miantoka ny fiarovana zava-pisotro
Ny fitaterana mora-tena mety amin'ny fitondrana fitaovana amin'ny hetsika fanatanjahan-tena any ivelany, kaonseritra, fitsangatsanganana park, tena mety ampiasaina any an-trano. Mariho tsara fa tsy mety amin'ny fitaterana ankizy izany.
Atosika na sintomy:Azo atao ny misafidy azo averina ary ny mpitan-tsoroka azo sintomina. Tena mety ampiasaina amin'ny zaridaina, fitsangantsanganana an-trano na amin'ny trolley entana, tena mety amin'ny mandeha amoron-dranomasina, mitoby, hetsika ara-panatanjahantena any ivelany ary amin'ny fotoana rehetra heverinao fa mety.
Canopy azo esorina sy harona aoriana. Ny valindrihana azo esorina dia hiaro ny entanao amin'ny orana sy ny taratra ultraviolet. Ny harona aoriana dia mahatonga ny fitehirizana ho mora kokoa.
Famolavolana olona:ity fiara misy kodiarana efatra ity dia manana freins eo aloha sy aoriana hifehezana ny fihetsiny rehefa atosika na sintonina. Ny hahavony manontolo amin'ny tranofiara dia mety hahatratra 44 santimetatra (eo amin'ny 111.76 cm), ahafahanao mitondra tsara ny tranofiara.
Aforitra sy fitehirizana haingana: famolavolana kely miforitra, aforitra kely kely, azonao aforitra amin'ny tanana iray; mitsitsia fotoana sy toerana, mety hitondrana ny filanao saha rehetra.
Tanana azo ovaina: miaraka amin'ny tahony azo ovaina, afaka mihodina milamina arakaraka ny filàna; tsy hianjera ny tahony, ary hihidy hihombo ny haavo; tsy mila miahiahy momba ny kalesy tsy voafehy.
Azo entina, mitahiry habaka: dia azo aforitra ao anaty famolavolana kely ary apetraka ao anaty fitoeran-kitapo miaraka aminy mba hitahirizana ao anaty vatan'ny fiara na fitehirizana.
laharana No. CW02
ara-nofo Polyester vy sy 600D
Size 67 × 41 × 46cm
Haben'ny mivalona 46 × 17cm
fonosana 1pc / kitapo
laharana No. CW03
Haben'ny mivalona 76x30x20cm
Lamba 600D Oxford
ara-nofo Tube vy
♦ Fampisehoana amin'ny antsipiriany
Ity vokatra ity dia azo ampiasaina amin'ny fotoana fialamboly an-kalamanjana maro, toy ny fandehanana any amin'ny valan-javaboary hitsangatsangana, ny fandehanana any ivelany dia azo ampiasaina hitaterana sakafo, rano, kojakoja sns. Mandehana amin'ny sary hosodoko, fialam-boly sns ... azo ampiasaina hanangonana ireo zavatra ilaina, mora ampiasaina. Ity sarety ity dia mety tsara amin'ny fitsangatsanganana eny an-tsena, zaridaina, morontsiraka, hetsika ara-panatanjahantena, filasiana ary maro hafa!
Mora apetraka ity vokatra ity. Azafady mba jereo ny boky momba ny fametrahana sy ny fandidiana.
Manampia mandefa an mailaka ny sales@ruiyitools.com
Matetika ny mpanjifa dia maneho fa ny vokany fampiasana dia tsara, fandidiana tsotra, fametrahana mora ary kalitao avo lenta.
Ho mpividy manaraka hijerena ity entana ity.
Fampiharana Fitsangatsanganana an-tokotany amoron-dranomasina any ivelany
Loko Loko namboarina
Manaraka: Fitaovana manara-penitra avo lenta
Fiara fialamboly ivelany
Kodiarana PU, Sina PU Foam Wheel, Kamio mixer, Caster Wheel, China PU Wheel, China Concrete Mixer,